Ma runbaa in dib u dhaca Doorashada Somaliland la xariirto Doorashada Federaalka Soomaaliya? [Video] - iftineducation.com
Ma runbaa in dib u dhaca Doorashada Somaliland la xariirto Doorashada Federaalka Soomaaliya? [Video]
iftineducation.com – Suxufi Simon Allison oo ka qeyb qaatay barnaamijka News Makers oo lagu falanqeenayey xaalada siyaasadeed iyo doorashada dhawaan dalka ka dhici doonta, ayaa sheegay in Diblumaasiyiin reer Galbeed ah u xaqiijiyeen in ay ku cadaadiyeen Somaliland inay dib u dhigto Doorashadooda si looga soo hormariyo Doorashada Federaalka Soomaaliya.
Horey ayey u jirtay tuhuno ay qabeen qaar kamid ah Siyaasiyiinta Mucaaridka Somaliland oo sheegayey in sababta doorashada Somaliland dib loogu dhigay ay la xariirto doorashada la filayo inay ka dhacdo dhinaca Federaalka Soomaaliya dhamaadka sanadka.
Dalalka Deeqda Siiya Soomaaliya ama Beesha Caalamka ayaa marar badan Hargeysa u tagay arrimaha la xariira Doorashada, iyadoo doorashadii Somaliland dib loogu dhigay illaa sanadka 2017.
Warbixin ku saabsan AMISOM oo la soo saaray